Chris Froome | October 2021
Isi > Chris Froome
ebe chris froome si
Ebee ka chris froome si - ajụjụ nkịtị
Ebee ka Chris Froome toro? A mụrụ Froome na Nairobi na nne na nna Britain bụ ndị mechara gbaa alụkwaghịm mgbe nna ya gbara akwụkwọ maka enweghị ego. Ya na nne ya, bụ onye gbara ume ịnya ụgbọ ịnyịnya ya, kwagara South Africa, ebe ọ gụrụ akwụkwọ wee bido ọzụzụ na nwata nwoke Kenyan bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè David Kinjah na afọ iri na abụọ.
izu uka chris age
Oge chrisly kwa izu - olee otu anyi si edozi
Emere kwa izu Chris nwere enyi nwanyị? Chris na Datrie dị nso nwa oge ugbu a, ha na-aga ezumike, na-agbakọ ọtụtụ oge, na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ọdịnaya. Enwere asịrị na di na nwunye ahụ na-eme mkpapụ, mana ha akwadoghị mmekọrịta.
chris froome igwe kwụ otu ebe ụdịdị
Chris froome bike ụdịdị - a ngwọta
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe Chris Froome na-eji? Froome ga na-ebugharị lekọtara ihe ọhụrụ OSTRO VAM etiti na nha 56cm. OSTRO VAM bụ otu n'ime ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na - eme ya niile, nke emebere iji chịkwaa agbụrụ niile. 20.01.2021
Chris horner doping - azịza ya na azịza ya
Chris Horner jiri peds? Horner enwetabeghị ule dị mma, ọ gọnarịkwala mgbe ọ na-eji ọgwụ na-eme ka arụmọrụ na-arụ ọrụ, n'oge na-adịbeghị anya mgbe mmeri ya na izu atọ Vuelta welitere enyo. Tupu Vuelta ahụ, ọ dịbeghị mgbe ọ bụla ọ masịrị ya imeri Grand Tour.
afọ ole bụ chris froome
Ego ole ka Chris Froome bara? Chris Froome net ruru: Chris Froome bụ onye na-agba ịnyịnya ịgba ọsọ n'okporo ụzọ Britain nke nwere akụ ruru nde $ 12.
kedukwanu chris froome
Kedu ka ogologo chris froome si dị mfe - azịza nye ajụjụ
Ogologo oge ole ka onye na-agba ịnyịnya ígwè nọ? Nnyocha nke 2017 nke Pro Cycling Stats chọpụtara na nkezi elu nke WorldTour cyclist bụ 5'9. Nnyocha ahụ chọpụtakwara na ndị na-arị ugwu dị ihe dị ka ọkara inch karịa mkpụmkpụ karịa ndị na-agba ọsọ na kwa ndị ọkachamara ọkachamara na-aga n'okporo ụzọ bụ ọkara nke anụ ọhịa karịa ndị ọzọ na-agba ịnyịnya WorldTour ndị ọzọ.